6 zvinhu zvinowanisa musika wekutengesa muna 2019 | Ehupfumi Zvemari
Simba idzva rekutarisana negore idzva nderimwe rezvishuwo zvinotarisirwa nevanhu vadiki nevepakati kuti vagamuchire 2019, kunyangwe zvichizoenderana nezvinhu zvakawanda. Pakupera kwezuva ndizvo zvichave zvinotungamira mafambiro achaitwa nemisika yemari gore rino, nekuti hapana chakareruka chinotarisirwa kuburitsa purofiti muhotera yekudyara. Kwete pasina, zvichave izere nezvipingamupinyi mushure megore ra2018 risina kumbogutsa zvido zvake. Iko kuchengetedzwa kwemabasa kunofanirwa kukunda pamusoro pezvimwe zvehunyanzvi kufunga.
Gore raenda isu rasara kuderera kweakanyanya epasi rose masheya indices pamwe nemamaki evha kubva 5% kusvika 15%. Mune mamwe mazwi, kuisa mari mu2018 hakuna kubatsira. Mushure mekuti misika yezvemari yagadzira kumusoro kumusoro kweanoda kusvika makore manomwe, kunyanya mushure mekushaikwa kwehupfumi. Zvakanaka, gore rino ratakasiya rave shanduko mukukwira mumusika wemasheya. Izvozvi zvinoramba zvichionekwa kuti zvichangove zvakamiswa munzira here kana kutanga kwechikamu chezvemari chemisika yemari.
Kubva pane ino mamiriro ese, hakuzove nesarudzo kunze kwekuita nekuchenjerera kana uchisangana nemisika yemasheya. Ehe, usatarisira, mune yakanakisa kesi, kuwongorora kukuru mumutengo wezvikamu. Kwete zvakati wandei, asi zvinotora rombo rakanaka kuzadzisa zvinangwa uye izvo zvichazopihwa zvakateedzana zvezvinhu zvatichaedza kutsanangura kubvira zvino zvichienda mberi. Zvinobva zvisikwa zvakasiyana-siyana uye chero zvazviri, vashoma uye vepakati varimari vanofanirwa kunge vakangwarira mumwedzi iri kuuya kuti vapinde kana kubuda mumisika yekutengesa.
1 Zviitiko: kukwira kwehuwandu
2 Makakatanwa mudunhu reyuro
3 Wedzera mumutengo wemafuta
4 Kudzikira kudzokororwa kwemakambani
5 Nyowani yakawandisa nguva
6 Kutya kuderera
Zviitiko: kukwira kwehuwandu
Pakupedzisira, iyo nguva isingadiwe nemunhu inoita kunge yasvika kana nhengo dzemari dzedunhu reyuro dzichizofunga nezve zvishoma nezvishoma kusimuka mumutengo wemari. Parizvino mutengo wemari haukoshese chinhu sezvauri pa0%, asi kana zvese zvikaramba zvichiitika sezvakanyorwa muzvinyorwa, zvinogona kuti pakupera kwechiitwa ichi zvichamisikidzwa munzvimbo iri pakati pe0,25% kusvika 0,75% .. Haisi yakawanda, asi ichiri chiyero chisingafarirwe mumisika yemari uye nekudaro inogona kukonzera kutengesa kukunda pamusoro pekutenga kwemwedzi gumi nembiri inotevera.
Rudzi urwu rwenhau harugamuchire zvakanaka nevashambadziri uye mune ino kesi haizove iyo yekusarudzika zvakare. Zvese zvinoenderana nehukuru hunopihwa kune izvi zvinowedzera mumutengo wemari. Nekuti pakutanga misika yakatodzikisira izvi kukwira mukukosha kwemari. Chero kukwira kusingaenzanisike kunoreva kudonha kwakapinza mumisika yemasheya uye kuderedzwa kwakawanda mumutengo wemakambani anotengeswa neruzhinji. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi uye mune dzimwe nguva zvakare kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa.
Makakatanwa mudunhu reyuro
Rimwe dambudziko iro gore idzva iri ratichangotanga rinogona kuunza ndere rinobva mukukakavadzana mune dzimwe nhengo dze European Union. Tichafanirwa kunge takasvinura mumwedzi iri kuuya nekuti chero nhau dzisina kunaka dzinokanganisa zvakanyanya mari dzakachengetwa mumisika yemari. Zvakare, hazvigone kukanganwika kuti zvimwe zvinotsigirwa zvine kukosha kwakakosha mumakisituru makuru emusika wemasheya aputswa. Mune mamwe mazwi, misika yatove yakaratidza zviratidzo zvakakwana zvekushaya simba zvekutarisa iri segore rakanaka rekupinda mumusika wemasheya.
Kune rimwe divi, rinenge riri gore resarudzo dzakakosha dzinokosha mune dzimwe nyika dzakakosha dzeEU uye vanogona kuunza kushamisika kwakashata izvo vatarisiri vasingatarisiri. Mupfungwa iyi, kungwarira kunofanira kukunda zvimwe zvekufunga. Zano rakanaka rekutengesa gore rakaomarara iri kutungamira mafambiro kuenda ku mapfupi mazuva ekupedzisira. Usambofa wakaita wepakati kana wakareba nguva dzekusingaperi sezvo njodzi dzacho dzinotopisa mukutarisana nekusanzwisisika kunoratidzwa nemisika yemari.
Wedzera mumutengo wemafuta
Chimwe chinhu chinogona kuyera shanduko yemisika yepasi rose yemashamba ndiko kukura kuri kuita musika wemafuta mumwedzi yapfuura. Ichi chinhu chakakosha hachina kunaka kumisika yemari uye mupfungwa iyi chinogona kutamba chinzvimbo chakakosha kuitira kuti kudzikira mumusika wemasheya kuenderere mberi mukati megore rino rekuwana. Vanoongorora zvemari vanofunga kuti mutengo mumafuta pamusoro pe $ 85 dhiramu rinobvisa chero kuyedza kudzoreredza zvakavanzika zveruzhinji.
Maonero panguva ino haasi kuvimbisa zvakanyanya kune vashoma uye vepakati varimi. Kupi mafungiro emusika ari kuwedzera yemari yemari yakadai segoridhe dema. Zvakaringana kuyeuka kuti makore mashoma apfuura mutengo wamafuta wanga uri mune imwe nhanho yaifamba pakati pemakumi matatu nemakumi mana emadhora dhiramu uye izvi zvakaita kuti zvive nyore kuti zvikamu pamusika wemari zvikwire, mune dzimwe nguva zvine hukasha hukuru. Muchiitiko ichi, mamiriro ezvinhu anogona kuchinja zvakanyanya kusvika pakutsigira kuti mafuta anogona kunge ari mubatanidzwa wakaipisisa wemisika yemastock yepasi rose.
Kudzikira kudzokororwa kwemakambani
Hapana mubvunzo kuti pane kumwe kudzikira mukuita purofiti kumakambani anotengeswa neruzhinji. Uye ichi chakakosha chinhu chinogona kutungamira kuchinjiso mumutengo wezvikamu zvine chekuita nematanho akaunzwa pakupera kwegore ra2018. Naizvozvo, isu tichafanirwa kunyatsoteerera kuti mabudiro ebhizinesi achave sei mune makota anotevera. Nekuti panogona kuve nekumwe kushamisika kwakashata uko kunogona kuita kuti iwe urasikirwe nemari yakawanda mukuita kwako pamusika wemusika. Nematanho anoita kunge akatosvika pane akanakisa emazinga avo kana zvasvika pamitengo yavo.
Kune rimwe divi, haugone kukanganwa kubva panguva dzino kuti iyo purofiti yambiro inogona kunge yakawandisa kupfuura kusvika zvino. Muchokwadi, mu2018 kwave kune dzimwe yambiro idzo dzakadonhedza pasi kukosha kwemamwe makambani akanyorwa. Kubva pane ino maonero, ichi chinhu chinogona kukutamba iwe yakaipa hunyengeri kana iwe ukaiswa mari mune ako emari midziyo. Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekutungamira mashandiro ako kunharaunda dzakachengeteka dzemusika wemari dzine dziviriro mumaakaundi ebhizinesi. Hazvishamisi kuti imari yako wega iri panjodzi mune ino nyowani yemusika wekutengesa.
Nyowani yakawandisa nguva
Zvakare hazvigone kutongwa kunze kwekuti misika yemasheya pasi rese inopinda mune yakasarudzika nzira yekumwe kusimba uye kuti inogona kukonzera iwe kurasikirwa nemari yakawanda kana iwe ukavhura zvigaro mune mamwe maitiro. Mupfungwa iyi, haigone kukanganikwa kuti kuenzana kwave kuri kukwira kumusoro makore mazhinji, yakanyanyisa kunzwisisiro yevamwe vanoongorora zvemari zvakanyanya. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero chingatsanangure kururamisa kwehumwe kusimba mumisika yemari.
Tatarisana nemamiriro ezvinhu aya, yakanakisa nzira yekudyara ndeyekuti uve mukati kukwana kwakazara. Uye zvakare, iyo ichakubatsira iwe kutora mukana wemabhizinesi mikana anomuka mumazuva mashoma anotevera pamusika wemusika. Nekuti pasina kupokana ivo vanozoonekwa uye mune ino pfungwa unofanirwa kuve wakagadzirira uye yakanyanya kurovedzwa ndeyekuve kunze kwemisika panguva ino zvisati zvaitika. Kune rimwe divi, iwe une zvimwe zvigadzirwa zvemari zvinoenderana nemari yakatarwa iyo inokupa iwe yakadzoserwa uye yakavimbiswa kudzoka gore rega. Ehezve, haina kunyanya kukwirira, asi ivo vanozokubatsira iwe kuita kuti kuchengetedza kwako kubatsire, uyezve, kure kure nenzira dzinotyisa dzekudyara.
Imwe yeanokonzeresa ekufamba kweiyo bearish mumisika yemasheya kutya kwevatengesi kuti chitsva kushaya mari. Ichi chinhu chiri kukonzeresa kuti kutengesa kuitwe mumisika yemari sezvo vatyairi vazhinji vari kutendeukira kumari yakatarwa senzira yekudzivirira zvido zvavo zvine chekuita nekutungamira kweguta ravo. Kubva pane ino maonero chaiwo, chinangwa chako chiripo chinofanirwa kunge chiri chekuti chiitiko ichi hachikubate, sezvakaitika nedambudziko rezvehupfumi ra2007 na2008, uko vazhinji vavo vakasungwa munzvimbo dzavo.
Hazvishamise kuti pane zvekare chinhu icho isu chatiri kutaura nezve kumwe kupisa kweiyo misika yemari. Iko maoko avo akasimba vatotanga kugadzirisa zvinzvimbo uye kunongedza yavo nzira yekudyara kune mamwe maodhi mhando. Zvichida iwe unogona kutevedzera zviito izvi kuti uvandudze chiyero cheakaundi yako yekuchengetedza kana iyo nyowani ichangotanga yapera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » 6 zvinhu zvinowanisa musika wekutengesa mu2019